Ukuhlanganiswa Kwendawo Yemakethe - I-Propars E-export nge-Amazon, Ebay, Allegro kanye ne-Etsy
Ukuhlanganiswa Kwendawo Yomakethe Yomhlaba Wonke
Letha ukuthengiselana kwakho nge-e-commerce ndawonye kuphaneli elilodwa futhi ukulawule ngokuzenzekelayo!
Amazwe ama-5 Esigcawini
Indawo Yemakethe yasePoland
Imakethe yaseFrance (Ngokushesha)
Imakethe yaseJalimane (Ngokushesha)
Indawo Yemakethe yase-Arabia
Indawo Yemakethe yaseJapan
Umhlaba jikelele (Kuyeza maduze)
Uhlelo lwe-ERP / Accounting
Uma uthengisa imikhiqizo esitolo sakho ku-inthanethi, uzothola imali eningi kakhulu. Yebo. Wonke umuntu uyakwazi lokhu manje. Abanikazi bezitolo abangakwazi ukuhambisana nesikhathi bathi “vulwe izinxanxathela zezitolo, kwafika i-internet, abadayisi banyamalala” baqala ukubona ukuthi ayikho enye into ababengayenza ngaphandle kokungena ngamunye ngamunye kwi-internet. Futhi ngempela, i-inthanethi nokuthengisa ku-inthanethi kungumsindisi wakho. Abanye benu bangase bathukuthele ngalokhu bese bethi, "Kuvelaphi lokhu, ukuthengisa ku-inthanethi, i-e-commerce, angazi ukuthi ...". Ukuthi uyathanda noma awuthandi, i-e-commerce ukuphela kwendlela yokusinda futhi uzuze okwengeziwe. Uyabuza ukuthi kungani? Ngoba izigidi zamakhasimende, aqhele ngamamayela, angakwazi ukudlula phambi komnyango wesitolo sakho, angena ku-inthanethi nsuku zonke. Uma unesitolo ku-inthanethi, izigidi zamakhasimende angasakwazi ukuphuma ku-inthanethi ngenxa yamafoni ahlakaniphile azulazula emnyango wesitolo sakho ku-inthanethi izikhathi eziningi. Ezinsukwini ezimbalwa, uzithola ulungiselela ama-oda eSivas, Ankara ngisho namadolobhana lapho impahla ingayi khona. Ngokwezibalo ze-Propars, isitolo esingazibandakanyi ne-e-commerce futhi esinesilinganiso semikhiqizo engama-500 sinyusa inzuzo yaso ngo-35% ezinyangeni eziyisithupha ngemuva kokuqala i-e-commerce. Ngaphezu kwalokho, leli izinga eliphansi kakhulu elaziwayo. Baningi kakhulu abaphumelele. Iningi lezinkampani eziqala i-e-commerce, uma zingalenzi iphutha elibangelwa yizo, phakathi nezinyanga ezi-1-2, ama-oda ayi-10-15 ngosuku aqala ukugcwala. * Amakhasimende aku-inthanethi alungile kakhulu kunalawo abeza esitolo sakho. Bakunikeza amaphuzu aphezulu lapho bethola i-oda lakho, olipakisha kahle futhi ulithumele ngezinsuku ezingu-1-2; iningi labo alilindeli okuningi; Isenzo esincane esisheshayo nesimnene sanele kubo. Ungamelani ne-e-commerce. Woza uqale ukuthengisa imikhiqizo esitolo sakho ku-inthanethi, wandise inzuzo yakho kanye nenzuzo.
Awu, uyini umkhiqizo ku-inthanethi?liyathengiswa ngempela?
ukuthengisa imikhiqizo ku-inthanethi kunezindlela ezimbili:
Yakha iwebhusayithi futhi uthengise imikhiqizo yakho kusukela lapho,
N11.com, iyahamba, I-Hepsiburada.com Ukuze ube yilungu leziza ezifana nokuvula isitolo nokudayisa imikhiqizo.
Zakhele isayithi futhi udayise imikhiqizo:
Uma usaqala ku-e-commerce, lena yindlela enzima kuwe. Ngoba kunezigidi zamasayithi ku-inthanethi, okusho ukuthi unezigidi zabantu oqhudelana nabo. Namuhla, akulula ukusetha nokuphatha iwebhusayithi, ukukhulisa i-SEO, ukubeka phezulu kumasayithi okusesha afana ne-Google. Kuyabiza futhi. Kudinga ukwaba isabelomali sokukhangisa nokukhokhela izinkampani noma ochwepheshe abaningi. Ngoba uma iwebhusayithi yakho ingahambisani neselula, ingenawo umklamo omuhle futhi ophumelelayo, noma uma ingekho phezulu ku-Google, ngeshwa, ayisebenzi. Esikhundleni sokutshala imali kanjalo nezindleko uma uqala i-e-commerce, qala ngelula kuqala. Ngakho enye inketho. Kunjalo, kufanele ube nesiza esikhethekile sakho, sisenkathini yesimanje manje. Kodwa ngenkathi wenza i-e-commerce yakho kalula ngenketho yesibili futhi uthole imali, uzonakekela isayithi lakho ngokuhamba kwesikhathi.
Ukuthengisa imikhiqizo kumasayithi afana ne-N11, Gittigidiyor:
Nansi indlela elula futhi engabizi yokuqala i-e-commerce. Kunezindawo ezine ezinkulu eTurkey lapho ungangena khona futhi udayise imikhiqizo. Sizibiza ngezine ezinkulu phakathi kwethu: •N11.com •Gittigidiyor.com •Hepsiburada.com •Sanalpazar.com Iningi lala masayithi akhangisa ku-inthanethi nakumabonakude ngesabelomali esikhulu sakho futhi siheha izigidi zamakhasimende. Ngamanye amazwi, izigidi zamakhasimende avakashela lawa masayithi nsuku zonke. ngomumo, ngokungabizi ngikulindile. Okufanele ukwenze nje ukuba yilungu lala masayithi futhi uvule isitolo esibonakalayo. Lena indlela engabizi kakhulu uma iqhathaniswa nenye inketho. Bakukhokhisa ikhomishini njengoba uthengisa, futhi abanye bafuna irenti yezitolo; kodwa izinombolo zihloniphekile. Ake sifinyelele iphuzu eliyinhloko. Ngemuva kokuvula isitolo kulawa masayithi, ubunzima bakudala be-e-commerce buqala. Udinga ukuthumela isikhangiso somkhiqizo ngamunye esitolo sakho; okungase kuthathe izinsuku uma unamakhulu emikhiqizo. Udinga ukuhlonza ngokushesha imikhiqizo engasekho esitolo sakho noma kumnikezeli wempahla bese uyisusa ngokushesha. Ngoba uma ungakuyeki ukushicilela umkhiqizo ongenawo, bese kungena i-oda lalowo mkhiqizo, amakhasimende azophula amaphuzu esitolo sakho ngoba awukwazi ukuwuthumela ngokushesha. Uma unamakhulu emikhiqizo, uzohlangabezana nalokhu njalo, ngakho-ke amaphuzu esitolo sakho azokwehla kakhulu futhi isitolo sizovalwa yisayithi. Uma uvule isitolo kwamanye amasayithi, ozosivula nakanjani lapho ujabulela ukunambitheka okunezithelo kwe-e-commerce, uma kukhona ukuthengiswa kwenye yamasayithi, kuzodingeka uvakashele wonke amasayithi futhi unciphise inani lesitoko. yomkhiqizo othengisiwe ngo -1. Kuzothatha izinsuku namahora ukuzama ukwenza zonke lezi zinto mathupha esikhundleni sokugxila ekulungiseleleni i-oda. Uzochitha amahora kukhompuyutha njengoba udinga ukuphendula ngokushesha kumilayezo yekhasimende engenayo. Futhi uzohlangabezana nezinkinga eziningi ze-e-commerce zakudala njengezinkulungwane zabanye abathengisi.
Kodwa ungakhathazeki. ngoba ukuhlanganiswa ikhona into enjalo.
Iyini i-Marketplace Integration?
Ukuhlanganisa cishe kusho ukuxhuma izinkundla ezimbili zokusebenza. Enye yezinto ezisebenza lapha uhlelo lokuphatha uhwebo lwe-Propars; enye ingenye yezindawo ezifana ne-N11 noma i-Gittigidiyor. p ku-ProparUkuhlanganiswa kwendawo ye-Azar nakhu. Ngamanye amazwi, i-Propar N11 ihlanganiswe nezindawo zemakethe esizishilo, njenge-Gittigidiyor, okungukuthi, ixhunywe kuyo ngokwayo, okungukuthi, isebenza ngokuxhunyiwe. I-Propar ine ukuhlanganiswa kwemakethe Ngokuxhuma kulawa masayithi, ikwenzela wonke umsebenzi onzima. Isicelo ukuhlanganiswa kwemakethe yilokho okushiwo: Ukuhlanganisa nokwenza umsebenzi nge-Propar! Uma usebenzisa i-Propar, uzoqale ulayishe uhlu lwakho lomkhiqizo ku-Propar ngosizo lwefayela le-XML noma le-Excel. Uhlu lwakho lwemikhiqizo luzobandakanya namagama, amakhodi esitoko, inani lesitoko, imininingwane yemininingwane kanye nezincazelo zemikhiqizo. Ngemva kwalokho, i-Propar izokwenza wonke umsebenzi onzima ngokuzenzakalelayo futhi isebenzise imininingwane yomkhiqizo oyilayishile ukuze uvule futhi uvale izikhangiso kuwo wonke lawa masayithi, ubuyekeze isitoko nokunye okuningi, futhi ngeke kudingeke usebenze.
Yini i-XML? I-XML iwuhlobo lwefayela elibukeka njengefayela le-Excel njengoba silazi, kodwa ligcinwe ku-inthanethi, hhayi kukhompuyutha. Ngokuvamile, abahlinzeki bakho bazoba ne-XML. Uma usebenzisa i-Propar, kwanele ukucela i-XML kubahlinzeki bakho ngemikhiqizo onayo bese uyilayisha ku-Propar. Uma ungenayo i-XML, ungasebenzisa futhi ifayela le-Excel elinolwazi lomkhiqizo. Ngale ndlela, ulwazi lomkhiqizo wakho lulayishwa ku-Propar ngobuningi ngasikhathi sinye. Uma ungenayo inombolo enkulu yemikhiqizo, ungabhalisa imikhiqizo yakho ngamunye ngamunye ku-Propar ngaphambi kokuthi uqale.